६ लाखमा बिक्यो हिटलरको कट्टु..!! - IAUA
६ लाखमा बिक्यो हिटलरको कट्टु..!!
ramkrishna October 8, 2017	६ लाखमा बिक्यो हिटलरको कट्टु..!!
जर्मनीका चर्चित तानाशाह हिटलरले प्रयोग गरेको कट्टु भने झन्डै ६ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । अमेरिकामा भएको एक लिलामीका क्रममा हिटलरको कट्टु ५५ सय अमेरिकी डलरमा लिलाम भएको हो ।
सेतो पाटे नाइलनको कट्टु निकै ठूलो आकारको थियो, १९ इन्च लामो । साथै यसको कम्मरको साइज ३९ थियो भने दायाँ माथिपट्टि हिटलरको नाम जनाउन ए एच लेखिएको थियो ।
अष्ट्रियाको ग्राजस्थित पार्कहोटलमा हिटलरले उक्त कट्टु छाडेका थिए । उक्त होटलमा हिटलर सन् १९३८ मा बसेका थिए ।उक्त होटलका तत्कालीन मालिकका नातिले लेखेको पत्र अनुसार उक्त होटलमा हिटलर सन् १९३८ को अप्रिल ३ र ४ तारेख बास बसेका थिए । त्यसक्रममा उनले आफू बसेको कोठामा आफ्नो एउटा कट्टु छाडेर गए । सोही कट्टु अहिले अमेरिकाको अलेक्जेन्डर हिस्टोरिकल अक्सन हाउसले ५ हजार ५ सय डलरमा लिलाम गरेको हो
Previous Previous post: यस्ता ५ गुण भएका युवकसँग मोहित हुन्छन् युवतीहरु
Next Next post: अब चिनियाँ रेल लुम्बिनीसम्म